Muranka Turkiya & Maraykanka oo gaaray joojinta Dal-kugalkii “Visa”2da dal – Kasmo Newspaper
Muranka Turkiya & Maraykanka oo gaaray joojinta Dal-kugalkii “Visa”2da dal
Updated - October 9, 2017 7:21 am GMT
London (Kasmo), Xiisadda Dibolomaasi ee Turkiya iyo Maraykanka ayaa meel sare maraysa, iyada oo hadda, 2da Dowladood joojiyeen adeegyadii Dal-kugalka (Visa), taas oo dhantaali doonta socdaalkii 2da dal.
Xukuumadda Ankara ayaa, 24 saac gudohood, go’aankii Maraykanka, ku amartay dhammaan Qunsuliyaheeda ka furan carriga Maraykanka, marka laga reebo xaalado gaar ah, in ay si ku-meelgaar ah u joojiyaan Dal-kugalkii laga qaadan jiray.
Nooca dal-kugalka laga hadlayo waxaa lagu magacaabaa “Non Immigrant Visa” oo la siiyo dadka u socda sida Waxbarashada, dalxiiska, ganacsiga, bukaannada caafimaadka, iwm
Maraykanka ayaa markii hore, Axaddii, tillaabadaas oo kale qaaday ka dib xariggii loo gaystay, toddobaadkii hore, xubin ka mid ah shaqaalaha Qunsuliyaddiisa Istanbul, kaas oo lagu tuhmay arrimo la xiriira Afgambigii dhicisoobay.
Xiriirka 2da dal ayaa sii xumaanayay wixii ka dambeeyay 17kii May, markaas oo 9 qofood oo dibadbax ka dhigaya aqalka safiirka Turkiya ee Washington, dhaawacyo u geysteen ilaalada Madaxweyne Erdogan oo booqasho ku joogay Maraykanka.
Xurgufta Turkiya iyo Maraykanka oo bahwadaag ku ah Gaashaanbuurta NATO waxay salka ku haysaa arrimo badan, sida, taageerada Maraykanku siiyo kooxda Kurdiga Pyd, magngalyada Fethullah Gulen iyo arrimo kale oo qayb ka ah dagaal ballaaran oo siyaasadeed oo guud ahaan Turkiga kala dhexeeya reer Galbeedka oo muddo dheer ay xulufo soo ahaayeen.